Maxkamadda Racfaanka oo xukunktay in guurka Islaamka uusan ku ansaxayn UK | Xaysimo
Home War Maxkamadda Racfaanka oo xukunktay in guurka Islaamka uusan ku ansaxayn UK
Maxkamadda Racfaanka oo xukunktay in guurka Islaamka uusan ku ansaxayn UK
Maxkamadda Sare ayaa 2018 waxa ay xukuntay in lamaanaha isku guursaday xafladda “nikaaxa” Islaamka uu waafaqsan habka guurka ee shuruucda Ingiriiska.
Hasayeeshee Maxkamadda Racfaanka ayaa haatan waxa ay sheegtay in xafladda meherkaasi aanay “sharciga waafaqsanayn”.
Xeer Ilaaliyaha Guud ayaa waxa uu racfaan ka qaatay go’aankaas hore ee maxkamadda.
‘Shareecada oo kaliya’
Xaakimku waxa uu inku daray in guurkooda uu ku dhacay hab waafaqsan Xeerka Qoyska, walow Mr Khan uu ku doodaayo in guurkaas uu waafaqsanaa “Shareecada Islaamka oo kaliya”.
Maxkamadda Racfaanka ayaase Jimcihii meesha ka saartay go’aanka waxa aanay sheegtay in guurkaas uusan “waafaqsanayn” sharciga guurka ee Ingiriiska.
Waxaa go’aanka maxkamadda lagu sharaxay in guurkaas uusan “gaarin heerkii loogu talagalay” maadaama aanan lagu qaban guri u diiwaangashay guurka, wax shahaado ah oo la soo saarayna aanay jirin amaba uusan goobta joogin waaxda diiwaangelinta.
“Lamaanaha iskuma aanay guursan shuruucda Ingiriiska”, garsoorayaasha maxkamadda racfaanka ayaa sidaasi sheegay.